I-China esempilweni i-oveni yaseDatshi inesakhono sokupheka esihle kakhulu esenziwe kunye neFektri | ISANXIA
Ingcaciso:50250 * 120mm
Ulwakhiwo lwentsimbi eqinileyo, le mbiza isasaza ubushushu ngokulinganayo ukusuka ezantsi ukuya kwiindonga ezisecaleni. Iyakwazi ukugcina ubushushu ngcono ukuze ukutya kwakho kuhlala kushushu ixesha elide. Ungapheka ukutya nayo ekhitshini lakho okanye ngaphandle endle.
Umphezulu ongafakwanga kwintonga uza ngaphandle kwazo naziphi na iikhemikhali eziyingozi ngenxa yoko kukhuselekile kwi-100% ukupheka ngayo. Ubume besilinda kunye neendonga ezisecaleni eziqinileyo zenza ukuba zihambelane nazo zonke iindawo zokupheka. Iyakwazi ukufudumeza ngokulinganayo kwaye igcine ubushushu ngcono
Yenziwe ngentsimbi kwaye yenziwa ngobuchwephesha bokugqiba, le nkampu inzulu ye-oveni yaseDatshi yomelele ngokwaneleyo ukuba imele imeko engaphandle engaphandle. Idyasi yeoyile yezityalo engenazo iikhemikhali izisa ukungabinantonga usebenzisa amava, ukhusela impilo yakho ngaphandle kokubeka esichengeni lula.
Iinkcukacha uyilo iimveliso
isiciko sesitya esinzulu sonyusa ukuhamba komoya nokupheka; isiphatho seluphu esifanelekileyo kwisivalo senza le mbiza ibe lula ukuyiphatha. Ujikeleze isitovu seDatshi. Imilenze yokudibanisa embizeni kunye nesiciko ivumela i-oveni ukuba ihlale ngokugqibeleleyo phezu komlilo wekampu; isiciko sinokusetyenziswa njenge skillet yokufryiza.
Yaziwa njengeMbiza yoBomi. Xa kuthelekiswa neembiza zezinye izinto, isitovu saseDatshi senziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu, kwaye siya kuhlala ixesha lokuphila ukuba sikhathalelwe ngokufanelekileyo. Ingasetyenziselwa esitovini nasehovini ekhaya, ukubonelela ngexabiso lemali.
Ukonga umbane kwaye kulungele okusingqongileyo. Ubushushu busasazwa ngokulinganayo kwaye bugcinwe, busenza ukuba kulungele ukujija okunzulu, ukuthunga kunye nokubhaka. Inezinto ezilungileyo zokugquma ubushushu kunye nesitywina esifanelekileyo, ke nkqu ne-novice camper ingenza inkukhu eyosiweyo enencasa ngale mbiza.
Nje ukuba ugqibile ukupheka, ukucoca nasemva kokhathalelo kulula. Qiniseka ukuba uyomisa imbiza ngokupheleleyo emva kokucoca kwaye ngexa imbiza iseshushu, ioyile encinci ngaphakathi epanini ngeoyile yakho oyikhethileyo, idyasi ebhityileyo yiyo yonke into oyifunayo. Sebenzisa ilaphu okanye itawuli yephepha ukuze uhlikihle nakuphi na ukugqitha.
Egqithileyo Phosa ipeni yentsimbi ngesiphatho esinye somthi akukho lula ukunamathela ngaphandle kokutyabeka
Okulandelayo: Iintsimbi eziphindwe kabini zensimbi yentsimbi ephumelele ibhaso elibomvu laseJamani
ebizwa ngokuba yiCast Iron Skillets, uNamel Skillet, Isinyithi se Iron Iron, I-Iron Iron Skillet, i-Cast yentsimbi enqabileyo, xtreme Iron Skillet,